Aung's Investment: 2/7/10 - 2/14/10
အိုကေ၊ ညက Marketကို ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိရင် DJIဟာ တဝုန်းဝုန်းတက်သွားတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေ တက်ကြွပြီး ကောက်တောင်ဝယ်လိုက်ကြလား မသိဘူး။ Don't jump in yet. I'll tell you why.
မနေ့က US Marketမဖွင့်ခင် ကောလဟာလတစ်ခုထွက်လာတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ EU Central Bank (ECB) President Jean-Claude Trichetဟာ Sydney, Australiaကနေ ခရီးစဉ်ချုံ့ပြီး Greeceပြဿနာကို အမြန်ရှင်းဖို့ Thursdayမှာလုပ်မယ့် European Union Summitမတိုင်ခင် ပြန်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Emergency Meetingဘာညာပေါ့။ ဘယ်သူကစဖွလိုက်လည်းတော့ မသိပါဘူး။ Greeceကို Bail outလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး Pre-market tradingမှာကတည်းက DJIဟာ ၇၀လောက် ဆောင့်တက်သွားပါတယ်။
ခဏကြာတော့ ECBက Spokespersonတစ်ယောက်က Trichetဟာ ဒီတိုင်းပဲ စောစောပြန်တာပါ။ ဘာမှ အရေးတကြီးမရှိပါဘူးလို့ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Marketကတော့ ဇွတ်ပဲ EU Summitကနေ Greeceကို ကယ်ဖို့ Bail out packageတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နေ့ခင်းလောက်မှာ တကယ်ပဲ Announcementတစ်ခုထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း မသဲမကွဲနဲ့ Eurozone Countriesတွေအားလုံးဟာ Greeceနဲ့ တခြားပြဿနာတိုင်းပြည်တွေကို Assistလုပ်ဖို့ ပဏာမတော့ သဘောတူထားကြပြီလို့ Annoucementလုပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကူညီမလည်းကတော့ ဘာမှ အသေးစိတ်ထွက်မလာသေးဘူး။ EU Summitပြီးမှပဲ အစောဆုံးသိနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ကယ်ချင်ကယ်မယ်၊ အရင်တော့ အစည်းအဝေးထိုင်ရဦးမယ်ဆိုတာပဲ အမှန်ဆုံးသတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ မသေချာသေးတဲ့ သတင်းကို Baseထားပြီး Investမလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ သတင်းတွေ ဘေးချပြီး Technicalဘက်ကို ကြည့်ရအောင်။ TAလုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ Candle, Trend Lineနဲ့ Support နဲ့ Resistance လိုင်းတွေပဲ ကြည့်ရုံပါပဲ။ DJI ဟာ 10200မှာ Resistanceရှိပါတယ်။ မနေ့က Candleကောင်းပေမယ့် Downtrend Lineဟာ Brokenမဖြစ်သေးပါဘူး။ Downtrendကို ပြတ်ပြတ်သားသား Breakoutဖြစ်တဲ့အထိ စောင့်သင့်ပါတယ်။ S&P500အတွက်လည်း အတူတူပါပဲ။ Downtrend still intact.
အခုဘာလုပ်ထားသင့်သလည်းဆိုတော့ ဝယ်ချင်တဲ့ Stockတွေကို တန်းစီထားပါ။ Fundamental Analysisကောင်းတဲ့Stockတွေကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် သူတို့ရဲ့ Technicalကို လေ့လာပါ။ ဥပမာပေးရရင် ကျွန်တော်တို့ Mallမှာ Discountချတာစောင့်သလိုပေါ့။ လိုတော့လိုချင်တာပဲ ဒါပေမယ့် ပိုတန်မယ့် အချိန်စောင့်ပြီး အချိန်တန်လို့ On-saleဆိုတာနဲ့ ပြေးဝယ်ရသလိုပါပဲ။ Marketမှာတော့ Financial Intelligenceရှိမှ On-saleကို သိပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်လနှစ်လလောက်အကြာမှာ အမြတ်ကောင်းကောင်း ရချင်သူများအတွက် Ready Steadyလုပ်ထားကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
aungs.investment@gmail.comကို ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Stockကို High-level Analysisလုပ်စေချင်ရင် လှမ်းပြီးEmailပို့နိုင်ပါတယ်။ အခကြေးငွေအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော်သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ Stockကို Analyseလုပ်ထားတာကို ဒီBlogမှာ Postအနေနဲ့ ပြန်တင်ပါမယ်။ ကျွန်တော့်လို Investmentကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့ ပိုပြီးInteractionရှိချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ အခုထိတော့ ပရိသတ်က အေးလွန်းတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 2/10/2010 04:09:00 PM0comments
Labels: correction, downtrend, ECB, high-level analysis, technical analysis
Uncertainty is the Biggest Enemy
Trading Day ၃၊ ၄ရက်အတွင်း ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ Eventတွေ တော်တော်မနည်းဘူး။ အောက်မှာ တစ်ခုချင်းစီကို Analyseလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Feb 5ရက်နေ့က Bureau of Labor Statisticsကနေ January 2010ရဲ့ Reportထုတ်ပါတယ်။ ဒီReportမှာ ထူးခြားတာကတော့ 2007အကုန် Recessionဖြစ်ကတည်းက ဘယ်လောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သလည်းဆိုတဲ့ Figureကို ပြန်ပြီး Reviseလုပ်ထားတဲ့ Figureတွေ ပါပါတယ်။ သတင်းစာHeadlineမှာ ဖတ်လိုက်ရင်တော့ Unemployment Rateဟာ ၁၀% ကနေ ၉.၇%ကို ကျသွားတဲ့အတွက် တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့။ တကယ်တမ်းကတော့ Unemployment Rateကို ဘယ်လိုတွက်လည်း သိရင် သိပ်ပျော်ဖို့ မကောင်းပါဘူး။ Headline အလုပ်လက်မဲ့ကို တွက်တဲ့နေရာမှာ အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ No. of Civilian Labor Forceလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှိတဲ့သူ + အလုပ်ရှာနေတဲ့သူ၊ အလုပ်လိုချင်ပေမယ့် မရသေးတဲ့သူတွေပေါ့။ Definitionကတော့ အဲဒီလိုရှာနေတဲ့သူတွေဟာ Surveyလုပ်တဲ့နေ့ကနေ လေးပတ်အတွင်းမှာ အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ လေးပတ်ကျော်သွားလို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး အလုပ်မရှာတော့တဲ့သူတွေ၊ မရှာချင်တော့တဲ့သူတွေဟာ Civilian Labour Force countထဲမှာ မပါတော့ပါဘူး။ ဒီလို Dropoutတွေများလာတဲ့အတွက် Unemployed Countလုပ်တဲ့နေရာမှာ နည်းသွားပါတယ်။ Economistsတွေဟာ အလုပ်အသစ်တွေတောင် Januaryထဲမှာ ထပ်ထည့်ဖြစ်မယ်မှန်းထာတာ၊ တကယ်တမ်းတော့ ၂၀၀၀၀တောင် ထပ်ပြုတ်ကျပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ Unemployed Person countကိုလည်း Reviseလုပ်လိုက်တော့ အစက ၈၅၀၀၀ဆိုရာကနေ သိပ်မများပါဘူး - ၁၅၀၀၀၀ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ့် Unemploymentတွက်တဲ့နေရာမှာ Labor Force Underutilizationကိုပါထည့်တွက်မှ တိုင်းပြည်ရဲ့ တကယ့်အခြေအနေကို ရပါမယ်။ ဒီLinkမှာ သွားကြည့်ပါ http://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm ။ Item U-6ကမှ အမေရိကားရဲ့ တကယ့် Unemployment Figureပါ။ အစိုးရဟာ အသေးဆုံးဂဏန်းမှ ရွေးပြောတာ မဆန်းပါဘူး :) Summaryပြောရရင် ဒီReportဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Good မဟုတ်ပါဘူး။ Not-badအဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ Fridayက Dow Jones Industrial Indexဟာ -၁၆၇ကျပြီးမှ ၁၀,၀၀၀အထက်ကျော်ရုံလေးပဲ ပိတ်သွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း DJဟာ Weekly chartမှာ အနှုတ်ပြနေပါတယ်။
PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain)လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေရဲ့ Deficitတွေဟာ ရှိသင့်ထက် GDPရဲ့ အချိုးထက် အရမ်းများနေလို့ EUက အသုံးချွေတာခိုင်းနေတာကြာပါပြီ။ Greeceအစိုးရက 2012အပြီး Deficit-cutting planကို တင်ပြပေမယ့် Tax hikeတွေ၊ လခလျော့မှာတွေပါတာကြောင့် Greeceက Unionအကြီးတွေဦးဆောင်ပြီး ဒီအပတ်ထဲမှာ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပြကြမယ် ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ရင် Greeceအစိုးရဟာ အပြောနဲ့ အလုပ်ညီပါ့မလားလို့ investorတွေက မယုံကြပါဘူး။ Portugalမှာလည်း အစိုးရရဲ့ Budget လျော့ချရေး ဥပဒေဟာ Oppositionကို ရှုံးပြီး အတည်ပြုမခံရတဲ့အပြင် Oppositionကတင်သွင်းတဲ့ Regional Developmentနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Billဟာ ပိုပြီးတောင် Deficitကို ဆိုးစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ပူတာက Spain။ Spainဟာ ခုချိန်ထိ အပြောခံရတဲ့အထဲပါပေမယ့် Low Keyဖြစ်နေတုန်းပဲ။ သူ့ဘက်က အသံပိုထွက်လာရင် Marketဟာ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Portugalနဲ့ Greeceပေါင်းမှ EU GDPရဲ့ ၄% မရှိပါဘူး။ Spainကတော့ EU GDPရဲ့ ၈%-၉%လောက်ရှိတဲ့အတွက် သူသာတကယ်ဆိုးပြီဆိုရင် Euro Dollarဟာ ပြုတ်ကျဖို့ပဲရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Weekendမှာ G-7 Finance Ministersတွေဟာ Articစက်ဝိုင်းနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ Canadaက Iquluitဆိုတဲ့နေရာမှာ တွေ့ကြပါတယ်။ Meetingရဲ့ outcomeကတော့ အစိုးရတွေဟာ Stimulus packageတွေကို သုံးမြဲဆက်သုံးသွားမယ်ဆိုပါတယ်။ Europeက Ministersတွေကတော့ Greeceကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှပြောဆိုသွားတာမတွေ့ရပါဘူး။ Greeceဟာ သူ့ပြဿနာကို သူရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ခက်တာက marketက အဲဒီ့စကားကို ရိုးနေပါပြီ။ ဘယ်သူ့မှလည်း မယုံကြတော့ပါဘူး။ G-7 countriesက ဘဏ်တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် Crisisဖြစ်ရင် Bailoutလုပ်ဖို့ Insurance Premiumလို စတောင်းဖို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဘဏ်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ပညာတော့ပေးမယ်ပေါ့လေ။
တရုတ်ဘက်ကတော့ နည်းနည်းအသံအေးတယ်။ မနေ့ကတော့ တရုတ်National Pension Fundရဲ့ Chairmanကတော့ တရုတ်ဟာ ဒီနှစ်Juneမတိုင်ခင်တော့ Interest Rateကို တင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ Consumer Priceဟာ ၁.၉%တက်ပြီး GDPကတော့ ၁၀.၇%တက်ပါတယ်။ Consumer Priceဟာ ၄%ထက် ပိုပြီဆိုရင်တော့ အစိုးရဟာ Inflationကို ထိန်းသိမ်းဖို့ Definitely အတိုးနှုန်းတင်ရတော့မယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Marketဟာ Second-half of 2010ကို Predictလုပ်လို့မရအောင် Uncertaintyတွေက များလာပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ တရုတ်ပြည်ဟာ အရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါပါတယ်။ သူက Slow Downလုပ်ပြီဆိုရင် သူ့လောက်Strongမဖြစ်တဲ့ အကြွေးဘလပွနဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ ပိုပြီးနှေးသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
မနေ့ညကတော့ အမေရိကားမှာ Democrat Representative John Murthaဆုံးသွားပါတယ်။ သူဟာ Congressမှာ Democratတွေအားထားရတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ Obamaကံဆိုးတာပေါ့။ Republicanတွေသာ ပိုပြီး အာဏာရှိလာမယ်ဆိုရင် Billတစ်ခုကို Approvalဖြစ်ဖို့ အချိန်ပိုကြာပြီး Marketထဲမှာ ပိုပြီး Uncertaintyတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြိတ်ဝိုင်းဝိုင်းနေတာကတော ကျွန်တော်နေတဲ့ Sydneyမှာပါ။ တိုင်းပြည်၂၄ပြည်က Central Bank အကြီးအကဲတွေဟာ Sydneyမှာ 2-day Meeting လုပ်ဖို့ ဒီနေ့အလျှိုလျှိုရောက်လာကြပါတယ်။ US, EU, Japan, China, India အကုန်ပါပါတယ်။ သူတို့ရဲ့Agendaကတော့ ဘယ်သူမှ သေချာမသိပါဘူး။ သေချာတာကတော့ Montetary Stimulus တွေကို ဘယ်လို ပြန်ရုတ်ကြမလည်း၊ Dubai ကစတဲ့ Sovergin Default issues အစရှိတာတွေတော့ ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Meetingရဲ့ Outcomeက Marketတွေကို ဘယ်လို Affectဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့မှ မသိသေးပါဘူး။ Australia Reserve Bank Governor Glenn Stevensဟာ Australiaကို Recessionမဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူမို့လို့ သူ့ဆီမှာလာဆုံကြတာ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်း နောက်ထပ် Uncertainty တစ်ခုပါပဲ။
မနေ့ညက DJIဟာ 10,000 marketကို အောင်မြင်စွာ ဖောက်သွားပြီး ပိတ်သွားပါတယ်။ Uncertaintyတွေ လျော့မသွားမချင်း marketထဲမှာ ငွေထားမယ့်သူတွေ နည်းနည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ လက်ရှိအခြေနေမှာ Marketဟာ Strongly Reboundဖြစ်ဖို့ ဘာမှ လောက်လောက်လားလား Dataမရှိသေးပါဘူး။ ဈေးကျတုန်း ပိုက်ဆံရအောင် မရှာတတ်ရင် ငွေကိုင်ပြီး ဘေးထွက်နေတာကတော့ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အောက်မှာ Update DJI Chartကို ပြထားပါတယ်။
American 8th US President (1837-41)
Posted by Aung Myo Htet at 2/09/2010 03:26:00 PM0comments
Labels: correction, european central bank, government, meetings, uncertainty